Liiska Musharaxiinta Abaalmarinta Tababaraha Ugu Fiican Ee England – Gool FM
Liiska Musharaxiinta Abaalmarinta Tababaraha Ugu Fiican Ee England
Dajiye May 14, 2018
(Premier League) 14 Maajo 2018. Ururka macalimiinta ee “The Association of Trainers” ayaa wuxuu daboolka ka qaaday looska musharaxiinta ku tartameysa ku guuleysiga abaal marinta macalinka ugu fiicnaa horyaalka Premier League ee dalka England xili ciyaareedkan 2017-2018.
Waxaa abaal marintan macalinka fiican horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan 2017-2018 ku jira waxaa ku tartamaya 6 macalin ee kala ah Jürgen Klopp, Pep Guardiola.
Sidoo kale waxaa liiskan waxaan ka marneen isla markaana qeyb ka ah macalimiin ay ka mid yihiin John Coleman, Sean Dyche, Nuno Espírito Santo, iyo Neil Warnock.
Balse musharaxiintan ugu cad cad ee liiskan ayaa ah Pep Guardiola oo ku hogaamiyay Man City ku guuleysiga horyaalka Premier League iyo Jürgen Klopp oo ay kooxdiisa Reds xili ciyaareedkan ku dhameysatay booska kaalinta 4-aad.
Manchester City oo la ogaaday xiddiga ay ka dhiganayso saxiixeeda koowaad marka uu furmo suuqa xagaaga – Waa kee?
RASMI: Xiriirka Kubadda Cagta Ee Talyaaniga Oo Goor Dhow Ku Dhawaaqay In Roberto Mancini Uu Noqonayo Macalinka Cusub Ee Xulka Italy.